China Insect killer mpamono bibikely Esbiothrin mpamokatra TC PBO 93% | mpamatsy | Senton
Bibikely mpamono bibikely Esbiothrin 93% TC PBO
Anaran'ny vokatra： Esbiothrin
Anaran'ny vokatra Esbiothrin
Bika Aman 'endrika ranon-javatra
Teboka mangotraka 386.8 ℃
hakitroky 1.05g / mol
Famokarana: 500 taonina / taona
Fitaterana: Ranomasina, Rivotra ， Tany
Taratasy fanamarinana: ICAMA, GMP
Kaody HS: 2918300017
Es-biothrindia a pyrethroid ambony kalitao Famonoana bibikely, miaraka amina karazana hetsika marobe, izy io dia mihetsika amin'ny alàlan'ny fifandraisana ary miavaka amin'ny a fiantraikany mahery vaika.Es-biothrindia mavitrika amin'ny bibikely manidina haingana sy mandady, indrindra ny moka, lalitra, fanenitra, anjomara, kalalao, parasy, bibikely, vitsika, sns.Es-biothrindia be mpampiasa ao amin'ny fananganana bibikely tsihy, coil moka ary emanators ranoka,Es-biothrinazo ampiasaina irery na ampiarahina amin'ny famonoana bibikely hafa, toy ny Bioresmethrin, Permethrin na Deltamethrin ary misy na tsy misy Synergist (Piperonyl butoxide) amin'ny vahaolana.Bibikely famonoana bibikely mafana, FIASANA MAHOMBY Famonoana bibikely agrochemical Imidacloprid, bibikely pyrethorid Cypermethrin dia ny vokatray ihany koa.Raha mila ny vokatray ianao dia mifandraisa aminay. Ny orinasanay dia orinasa iraisam-pirenena matihanina.
Fampiharana: Misy hetsika famonoana mahery vaikaary ny fiatraikany amin'ny bibikely toy ny moka, lainga sns. Tsara kokoa noho ny tetramethrin io. Miaraka amin'ny tsindry etona sahaza azy dia ampiharina amin'ny coil, mat ary cairan'ny etona.
Dosage natolotra: Ao anaty coil, atiny 0,15-0,2% namboarina niaraka tamin'ny mpamatsy synergistic vitsivitsy; amin'ny tsihy moka electro-thermal, atiny 20% namboarina tamin'ny solvent, propellant, developer, antioxidant, ary aromatizer; amin'ny fanomanana aerosol, atiny 0,05% -0,1% namboarina niaraka tamin'ny mpamono olona mahafaty sy synergistic.
Toetrisetra: LD am-bava maharary50 hatramin'ny voalavo 784mg / kg.
HEBEI SENTON dia orinasa mpivarotra varotra iraisam-pirenena matihanina any Shijiazhuang, Sina. Anisan'izany ny orinasa lehibeAgrochemicals, API & Mpanelanelana sy simika fototra. Miantehitra amin'ny mpiara-miasa maharitra sy ny ekipanay, manolo-tena izahay hanome ny vokatra mety indrindra sy ny serivisy tsara indrindra mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa ankehitriny.
Mitady mpanamboatra sy mpamatsy bibikely ambony kalitao indrindra Esbiothrin? Manana safidy malalaka amin'ny vidiny lafo izahay hanampiana anao hamorona. Ny fihetsika haingana rehetraFahasalamam-bahoakaAzo antoka ny kalitaon'ny bibikely. Izahay dia orinasa niandohan'i China momba ny bibikely bibikely esbiothrin. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Teo aloha: Herbicide voafantina mandritra ny fotoana fohy ny Hydrazide maleic Hydrazide
D-allethrin famonoana bibikely avo lenta
Pesticide biolojika famonoana bibikely ao an-trano ...
Diethyltoluamide famonoana bibikely ampiasaina ao an-trano
Bibikely famonoana bibikely Esbiothrin 93% TC
Tetramethrin famonoana bibikely matanjaka
Vokatra fambolena avo lenta bibikely famonoana bibikely ...